4 Underrated स्थान युरोप पहुँच भइरहेको रेल मा | एक ट्रेन सेव
घर > रेल यात्रा हल्याण्ड >4Underrated स्थान युरोप पहुँच भइरहेको रेल मा
सबै keen यात्री बाहिर त्यहाँ पहुँच भइरहेको रेल द्वारा युरोप मा स्थानहरू खोजिरहेको जसले तपाईंलाई बरु एक हवाइजहाज भन्दा रेल यात्रा thrill को सुख अँगालेको थियो किनभने लागि, यहाँ ठूलो समाचार टुक्रा तपाईंलाई मनपर्ने छौँ छ. युरोपेली रेल यात्राको ठूलो शहर हृदय मा दैनिक सवारी, तपाईं अनुमति युरोप गरेको विचित्रताहरू अनुभव एक रेल सवारी असामान्य अनुभव आनन्द लिई रहनुभएको बेलामा बैंक तोडने बिना.
Here are some great युरोप मा स्थानहरू रेल द्वारा पहुँच भइरहेको:
यो रेल सवारी बारेमा लागि पछिल्लो हुनेछ5घण्टा र एक फिर्ती टिकट को लागि खर्च लगभग 168 £. तपाईं फ्रान्स भ्रमण बारे दोस्रो विचार भइरहेको छ भने, यहाँ तपाईं नकारात्मक मनोवृत्ति ड्रप गर्नुपर्ने छ. तपाईंको रेल टिकट प्राप्त क्रमबद्ध र यो सुन्दर देश तिर टाउको. सबै भन्दा पहिला, फ्रान्सेली महिला सुन्दर छन्. दोस्रो, खाना उत्कृष्ट छ, र रक्सी महंगा तर यो मूल्य - सबै तिनीहरूले यो छ भन्न छ. सफलतापूर्वक Gallic र जर्मन प्रभाव विवाह कि देश टाढा द्वारा छ सबैभन्दा शानदार अनुभव को एक तपाईं एक जीवनकालमा हेर्न प्राप्त. युरोप पहुँच भइरहेको रेल सबै ठाँउबाट, स्ट्रासबर्ग तपाईं swoon हुनेछ, र तपाईं सुपर नाटकीय अगाडि selfies लिएर गरिने स्ट्रासबर्ग गिरजाघर.
पुस्तक समातेर तपाईँले लागि पढ्न चाहनुहुन्छ छौँ 5.30 घण्टा कि यो कोलोन प्राप्त गर्न लिन्छु कसरी लामो किनभने. सीधा आफ्नो प्रश्नको जवाफ: हो, तपाईं ब्रसेल्स मा रेल परिवर्तन गरिने. फिर्ती टिकट लागत £ 177, तर यो लायक छ. किन? किनभने यो छ, निस्सन्देह, जर्मनी मा सबै भन्दा आकर्षक शहर; regally को राइन को बैंकहरू बसिरहेका, कोलोन सम्पूर्ण वर्षैभरि अद्भुत देखिन्छ. तपाईं एक foodie छन्? तपाईं हूँ Frankenturm को पानी छेउ तानेर संग इंटरनेट एक्सेस प्रेम छौँ! पनि, जाँच गर्नुहोस् संग्रहालय शानदार आधुनिक कला मा एक नजर लागि लुडविग.
रोट्टरड्याम रेल द्वारा पहुँच भइरहेको युरोप मा सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मध्ये एक छ. तपाईं लगभग चार घण्टा सवारी छौँ, र ब्रसेल्स मा रेल परिवर्तन हुनेछ. तपाईं आफ्नो फिर्ती टिकट मा £ 185 भन्दा बढी खर्च हुँदैन. रोट्टरड्याम लामो कारण क्रेन र ढुवानी कन्टेनर तर केही यसको किरकिरा पोर्टमा नकारात्मक प्रतिष्ठा एक प्रकारको आयोजित छ. हालै, यसलाई प्रतिष्ठा र प्राप्त पर्यटकहरु एक सम्पूर्ण नयाँ प्रकाश मा यो हेर्न भनेर बन्द मिलान छ. वरिपरि यस समय, तपाईं आफ्नो कलात्मक खजाना trove लागि शहर प्रेम छौँ, the Museum Boijmans Van Beuningen which “which runs the gamut from Brueghel the Elder to Salvador Dali.” हेर्न धेरै र यहाँ अनुभव त्यहाँ, र वास्तवमा भन्ने रोट्टरड्याम रेल द्वारा पहुँच भइरहेको छ बस अर्को प्लस छ.
साथै, बाटो मा तपाईं प्रसिद्ध देख्ने Tulip क्षेत्रहरू, यो निश्चित ठूलो अनुभूति मा शहर तपाईं प्राप्त हुनेछ.
हाम्रो अन्तिम छान्ने “युरोप पहुँच भइरहेको रेल स्थानहरू” छ – आन्ट्वर्प (बेल्जियम)
प्राप्त गर्न तेज तरिका आन्ट्वर्प रेल ब्रसेल्स मा रेल द्वारा लगभग चार घण्टा यात्रा र परिवर्तन गरेर छ. तपाईं अविश्वसनीय छ जो एक फिर्ती टिकट को लागि माथि £ 87 तिर्न छैन. यसको अजीब स्थिति बावजुद (शहर बेल्जियम र नेदरल्यान्ड बीच सीमाना छ), आन्ट्वर्प छ, अनौठो पर्याप्त, सुपर रेल पहुँच. तपाईं पनि Eurostar मार्फत एक "कुनै पनि बेल्जियम स्टेशन" टिकट किन्न र देशमा कहीं प्राप्त गर्न सक्छन्, आन्ट्वर्प समावेश - ब्रसेल्स एउटा सवारी जस्तै मूल्य मा. आन्ट्वर्प सबै हीरा प्रेमीहरूको लागि धेरै रोचक हुनेछ: आन्ट्वर्प, बेल्जियम शहर हुनुको दावा जो आफ्नो हीरा जिल्ला मा prides जहाँ केही सबैभन्दा असाधारण काटन को, चमकाने, र हीरे को व्यापार / रत्न ठाउँ लिन.
Breda आन्ट्वर्प गाडिहरु गर्न
सम्पर्क बचत एक ट्रेन पहुँच भइरहेको रेल द्वारा युरोप मा ठाउँमा आफ्नो रेल यात्रा बुक गर्न र हामी कुनै पनि महंगा बुकिंग शुल्क तपाईं राहत हुनेछ, जटिल बुकिंग प्रक्रिया, र असम्भव दर. हामी तपाईँलाई बाटो हरेक चरण ढाकिएको भयो. र, एक पटक सबै गरेको क्रमबद्ध – तपाईं आफ्नो रेल सवारी र गन्तव्य आनन्द बनाउन, फोटो धेरै लिन र हामीलाई थाहा कसरी सबै गए गरौं!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#rotterdam एन्ट्वर्प स्ट्रासबर्ग रेल सुझावहरू ट्राभलकोलोन